China kuLaos-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Mutsetse Webasa>Southeast Asia Line>China kuLaos
Kutumira kubva kuChina kuenda kuLaos
Kana iwe uchitsvaga wekuvimbika wekutakura zvinhu kuti ubatsire kutumira kwako kubva kuChina kuenda kuLaos, iwe uri munzvimbo chaiyo.
Kunyangwe sevhisi yekutakura kubva kuChina kuenda kuLaos yakura kwazvo mazuva ano, SHL inogona kugara ichiedza kuita logistics kushanda zvirinani, kunze kwekugadzirisa mhinduro uye basa rakanaka, isu zvakare tinogona kupa kukwikwidzana mitengo kubva kuChina kuenda kuLaos.
SHL ichabatsira yako kusarudza yakanakisa nzira yekutakura, yemakwikwi yekutumira mutengo uye akanakisa makambani ekutumira kuti ubatsire kupinza kwako kubva kuChina kuenda kuLaos.
China European Mugwagwa Yekutakura kubva kuChina kuenda kuLaos
China Railway Express kubva kuChina kuenda kuLaos
SHL inopa yakatsiga njanji sevhisi pakati peChina neLaos yeFCL neLCL zvinhu zvekutakura, Imwe Belt uye Imwe Road projekiti yekugadziriswa kwekupinza uye kutumira kunze zvakagadziriswa mhinduro uye isu tinogona kugadzirisa matambudziko ekubvisa kwetsika muChina.
Heavy Cargo Njanji Yekutakura Kubva kuChina kuenda kuLaos
SHL inogona kupa Kavha Rori крытый вагон Vhura Wagon полувагонах вагон Flatbed Rori платфрму вагон, chaiyo michina, mota uye inorema michina kubva kuChina kuenda kuLaos Tinogona kupa imwechete yekumira uye yakagadzirirwa mhinduro.
Ro-Ro / Break Bulk Kutakura kubva kuChina kuenda kuLaos
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK yezvakanaka michina, mota nemidziyo inorema kubva kuChina kuenda kuLaos Tinogona kupa imwechete yekumira uye yakagadzirirwa mhinduro.
Kutakura Gungwa Kutakura kubva kuChina kuenda kuLaos
SHL ine yakagadzika huwandu hwekutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuFelixstowe, Southampton, nezvimwewo. Kuti isu tigare tichiwana yakanaka gungwa mitoro kuenda kuLaos port kubva kune vakawanda vatakuri, uye tinogona kuona nzvimbo yemidziyo kunyangwe mumwaka wepamusoro.
Kutakura Kwemhepo Kutakura kubva kuChina kuenda kuLaos
Kune akawanda anokosha enhandare dzenyika dzakawanda muLaos uye kune zvakare zvakawanda zvekutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuLaos nendege, SHL inogona kupa yakakwikwidza kwazvo kutakura zvinhu zvemhepo zvakaderera kupfuura musika kumutengi wedu zvichibva pane yako yekuda nguva.
China ingangoita 7,775 km kubva kuLaos asi kuyambuka chinhambwe ichi kunogona kutora nguva yakareba nekuda kwenzira dzegungwa dzinotsanangurwa nemitumbi yemvura.
Asati asarudza iyi nzira yekutumira, iye / iye anofanirwa kunge achizivana nezviteshi zvakasiyana zvese muChina neLaos.
Main Ndege muLaos
Maitiro Ekutumira kubva kuChina kuenda kuLaos
Pese paunenge uchiunza kubva kuChina kuenda kuLaos, unogona kusarudza nzira zhinji dzekutakura.
Ndeipi chiteshi chandinofanira kushandisa kutumira kubva kuChina kuenda kuLaos?
Nekuti iwe unoda doko rinogona kukusanganisa iwe zvakananga kuLaos
Ndeipi nguva yakazara inotorwa kutumira kubva kuChina kuenda kuLaos?
Muchidimbu, iwe unogona kukoshesa mune zvese izvi kuti uwane nguva yese yekutora ichatora kubva kuChina kuenda kuLaos
Vafambisi vekutakura vakadaro vanoziva mitemo nemirau inotonga kuendesa kunze kubva kuChina kuenda kuLaos